Ibhrawuza yeWebhu yeMozilla Firefox — Indawo okuyo kwiFirefox — Mozilla
Ukubhrawza Okufunisela Ngendawo
IFirefox ingaxelela iiwebhsayithi apho ukhoyo ukuze ufumane inkcazelo efaneleka nesebenziseka kakhulu. Imayela nokwenze iWebhu iphucuke ngakumbi – yaye yenziwa ngendlela ezihlonela ngakumbi iimfihlelo zakho. Khawuyizame!
Yintoni ukuqonda indawo yokubhrawuza?
IiWebhsayithi ezisebenzisa ukubhrawuza okufunisela indawo ziya kukubuza ukuba undawoni ukuze zikunike inkcazelo eyimfuneko ngakumbi, okanye zonge ixesha lakho ngoxa ukhangela. Makhe sithi ukhangela irestyurenti yepizza kwindawo ohlala kuyo. Le webhsayithi iya kuthi ikucele ukuba uchaze indawo okuyo ukuze xa ukhangela “ipizza” ufumane impendulo oyifunayo... akukho nkcazelo ingakumbi nokutayipa okungakumbi okufunekayo.
Okanye ukuba wandlala izalathiso zokutya kwindawo ethile, iwebhsayithi iya kwazi apho uqala khona ukuze usuke nje uyixelele apho ufuna ukuya khona.
Le nkonzo yeyokuzithandela ngokupheleleyo – IFirefox ayiyichazi indawo okuyo ngaphandle kwemvume yakho – yaye yenziwa kuhlonelwa ngokupheleleyo iimfihlelo zakho. Yaye njengazo zonke ii-elementi zeFirefox, iyilwa kusetyenziswa imilinganiselo evulelekileyo ukwenza lula ukwamkelwa ngabavelisi beWebhu.
Xa utyelela iwebhsayithi efunisela ngendawo, iFirefox iya kukubuza ukuba ufuna ukwabelana ngendawo.
Ukuba uyavuma, iFirefox iqokelela inkcazelo ngeendawo ezikufutshane ezinewayalesi neadresi yekhompyutha yakho yeiIP. Emva koko, ithumela le nkcazelo kumnikezeli wenkonzo wendawo ngokuzenzekelayo, iGoogle Location Services, ukuze iqikelele indawo okuyo. Olo qikelelo lwendawo luthi luchazwe kwiwebhsayithi ecelayo.
Ukuba uthi akuvumi, iFirefox ayisayi kwenza nto.
Zichane kangakanani iindawo?
Ukuchana kwahluka kakhulu ngokweendawo ngeendawo. Kwezinye iindawo, abanikezeli ngeenkonzo bethu banokukwazi ukuchaza indawo ukuya kutsho kwiimitha ezimbalwa. Noko ke, kweminye imimandla kunokufuneka ngaphezu kunoko. Zonke iindawo ezibuyiswa ngabanikezeli ngeenkonzo bethu luqikelelo kuphela yaye asiqinisekisi ukuchana kweendawo ezinikiweyo. Sicela ungayisebenzisi le nkcazelo kwiimeko zongxamiseko. Sebenzisa nje ingqiqo.
Yiyiphi inkcazelo ethunyelwayo, yaye kubani? Yaye iimfihlelo zam zikhuselwe kangakanani?
Imfihlelo yakho ibaluleke kakhulu kuthi, yaye uFirefox akaze achaze indawo okuyo ngaphandle kwemvume yakho. Xa utyelela iphepha elicela inkcazelo yakho, uya kubuzwa ngaphambi kokuba nayiphi na inkcazelo ichazwe kwiwebhsayithi ecelayo nomnye umnikezeli weenkonzo.
Ngokuzenzekelayo, iFirefox isebenzisa iGoogle Location Services ukuze ifumanise indawo okuyo ngokuthumela:
i-IP adresi yekhompyutha yakho,
inkcazelo ngeendawo ezikutshane zokufumana iwayalesi, kunye
nesifumani somthengi sesiquphe, esabelwe nguGoogle, esiphelelwayo qho kwiiveki ezi-2.
Ukuze ufumane ingcaciso epheleleyo yenkcazelo eqokelelwe yaza yasetyenziswa nguFirefox, nceda ubone ISaziso Semfihlelo SeFirefox.
Inkcazelo itshintsha kuqhagamshelo olukhowudiweyo ukukhusela imfihlelo yakho. Xa iFirefox inenkcazelo yendawo yakho, iyidlulisela kwiwebhsayithi eyicelileyo. Ngethuba elingephi igama okanye indawo yewebhsayithi oyityelelayo, okanye naziphi na iikuki, ezikhe zabiwa neGoogle Location Services.
UMozilla okanye uGoogle akasayi kusebenzisa inkcazelo eqokelelwe yiGoogle Location Services ukuze ifumanise okanye ijonge izinto ozenzayo.
Ukuze ufumane inkcazelo ngoko iwebhsayithi ecelayo eyenzayo ngenkcazelo yendawo okuyo, sicela ubhekisele kwipolisi yeemfihlelo yewebhsayithi.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngeemfihlelo zakho, funda kwakhona:
Isaziso Sobungasese SeMozilla Firefox
ipolisi yeemfihlelo yeGoogle
Ngaba ndiyetrekwa njengoko ndibhrawa iwebhu?
Hayi. IFirefox kuphela icela indawo xa iwebhsayithi isenza isicelo, ize ichaze kuphela indawo yakho xa umsebenzisi egunyazise isicelo. IFirefox ayitreki okanye ikhumbule indawo okuyo njengoko ubhrawza.
Ndiyicima njani imvume enikwe isayithi?
Ukuba unike iFirefox imvume yokusoloko uchaza indawo okuyo kwisayithi uze kamva utshintshe ingqondo, unokuthi ngokulula uyicime loo mvume. Ungayenza ngolu hlobo:
Navigate kwisayithi apho uye wanika khona imvume
Yiya kwie Tools menu, uze ukhethe Page Info
Khetha ithebhu yeeMvume
Tshintsha isetingi yeShare Location
Ndikucima njani isigxina ukuBhrawza okuFunisela iNdawo?
UkuBhrawza okuFunisela iNdawo kusoloko kungena kwiFirefox. Ayikho inkcazelo yendawo ekhe ithunyelwe ngaphandle kwemvume yakho. Ukuba ufuna ukuyekisa le fitsha ngokupheleleyo, sicela ulandele le seti yamanyathelo:
Kwibha yeURL, tayipa ngeconfig
Klika kabini ku geo.enabled preferensi
Ukubhrawuza okufunisela indawo ngoku kuyekisiwe
Ndingafaka njani kwi-Geolocation kwiwebhusayithi yam?
Ungadibanisa inkxaso yeGeolocation kwinkonzo yakho ngokulandela imiyalelo kwi Mozilla Developer Center.
Oops! kuvele impazamo ngoku sizama ukufumanisa indawo okuyo.
Iinxalenye zesi siqulatho zi- ©1998–2018 ziyilwe ngabanikeli be-mozilla.org. Umba ofumanekayo phantsi kwelayisenisi ye-Creative Commons.
Ulwimi Afrikaans عربي অসমীয়া Asturianu Български বাংলা (বাংলাদেশ) বাংলা (ভারত) Bosanski Català Maya Kaqchikel Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Dolnoserbšćina Ελληνικά English (British) English Esperanto Español (de Argentina) Español (de Chile) Español (de España) Español (de México) Eesti keel Euskara فارسی suomi Français Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego ગુજરાતી (ભારત) עברית हिन्दी (भारत) Hrvatski Hornjoserbsce magyar Հայերեն Bahasa Indonesia íslenska Italiano 日本語 ქართული Taqbaylit Қазақ ಕನ್ನಡ 한국어 Lietuvių Latviešu Македонски മലയാളം मराठी Norsk bokmål Nederlands Norsk nynorsk occitan (lengadocian) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) Polski Português (do Brasil) Português (Europeu) rumantsch Română Русский සිංහල slovenčina Slovenščina Soŋay Shqip Српски Svenska தமிழ் తెలుగు ไทย Türkçe Українська Tiếng Việt isiXhosa 中文 (简体) 正體中文 (繁體)